Soo dejisan EndNote 8.2 – Vessoft
Office, Tafatirka Text /
Soo dejisan EndNote
Raad – software ah si aad u baadhid ku links bibliographic ama macluumaad ee database ee maktabadaha iyo xarumaha cilmi ah ee dunida oo dhan. Raad raaca wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka raadi xog bibliographic, joornaalada sayniska, buugaag ama articles, kaas oo si weyn loo fududeeyo hawsha at qoraal publications kala duwan sayniska iyo dissertation. Raad ku jira database badan oo ah hababka ku qorshayso mashruuc oo ay awood u leh inuu abuuro aad u gooniga ah ama la beddelo kuwa hadda jira. Software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas la maktabadda internetka ee adeegga. Sidoo kale raad raaca sidoo kale u saamaxaaya in ay oggolaadaan in la gaaro dadka kale ee in ay iska kaashadaan mashruuca.
Raadi xogta bibliographic
Kala soocida ilaha ugu by kooxaha
Taageerada qaabka PDF
EndNote Software la xiriira:
Mid ka mid ah analogues hoggaamineed oo lacag la'aan ah Office Microsoft ah. Software wuxuu taageeraa qaabab ugu caansan si ay u gaaraan waafaqsan ugu badnaan la software kale xafiiska.
Horumarinta Tafatirka Text
software The loo qoro buugaagta, maqaallada iyo buugaagta cilmiga ah oo ku saabsan cilmiga saxda ah content ee kaas oo ku jira xisaabaadka adag.